Ukunyathelisa kwe-DH Flexo | Ukuhola umkhiqizi womshini we-flexo
Ukushicilelwa kwe-DH Flexo
Umkhiqizi woMshini wokuPrinta wamaFlexo
Umshini wokunyathelisa we-Flexo
Ilebuli, ukulandelela i-carton nokupakisha okuguquguqukayo
I-DH Flexo Printing Technology
Ekuqaleni yasungulwa ngo-1996, i-DH Flexo Printing Technology Inc.ibe ngumkhiqizi ophambili womshini wokuphrinta we-flexo eChina.
Ngemuva kokuthuthukiswa kweminyaka engu-22, i-DH iphumelele ukukhishwa umshini wokunyathelisa we-flexo emaphethelweni amaningi wokugcina umakethe welebuli, ukulandwa kwebhodi lebhokisi kanye nokunyathelisa okupakethe kokupakisha. Yonke le mishini iklanyelwe ukukunikeza umsebenzi wokusetha okusheshayo kakhulu, ikhwalithi yokuphrinta engcono kanye nokususwa kwempahla encane.
DH-OFEM Gearless CI umshini wokunyathelisa we-flexo
I-DH-OFEM ingumshini wokunyathelisa we-flexo wamanje wokukhiqiza amaphakheji aphezulu aphezulu. Yakhelwe emcimbini wemodeli, ngokukhetha okunengqondo kwemishini ejwayelekile.
Umshini wokunyathelisa we-DH-ROC we-Gearless modular
I-DH-ROC iyimishini yokuphrinta ehamba phambili yemoduli ye-flexo ene-gearless driven system. Isivinini sokuklama singu-450m / min futhi samukela ubuchwepheshe obuphambili kakhulu njengobuchwepheshe be-sleeve, uhlelo lwe-gearless drive, i-100% yokuhlolwa kwekhwalithi njll.
I-DH-Kirin ngumshini wokuphrinta we-modular owenzelwe ukunikeza ukusethwa komsebenzi okusheshayo. Yilebula lakho lokuzikhethela elingcono kakhulu nomsebenzi wokuphrinta wokupakisha oguqukayo. Ingafakwa amayunithi amaningi ongawazikhethela afana nokusika okokufa, ukunyathela okubandayo, ukuvikela kanye ne-sheeter njll.
Umshini wokunyathelisa we-fleh we-DH-JL 2200mm ulungele ukulethwa
I-DH-FP i-flexo encane imemezela e-Uganda
Umshini wokuqala wokunyathelisa we-DH-Jiaolong wabonisa eSibonisweni se-Shanghai 2019 SINO Corrugated.
Umshini wokushisa we-flexo omusha we-DH-ROC onikezwe kumakhasimende
Umshini wokushicilela we-fleh omusha we-DH ofakiwe eTurkey
I-copyright © 2021 DH Flexo Ukuphrinta - Lyrical WordPress theme by GoDaddy